Kutevedzera Dombo Coating Kuvaka Nongedzero | Lingshou
Kutevedzera Dombo Coating Kuvaka Nongedzero
Zvombo: Zvishandiso zvinotevera zvinofanirwa kuwanikwa isati yavakwa. Iwo akajairika uye iwe unogona kuvawana muzvivakwa zvekuvaka zvitoro kana ma Hardware zvitoro.
1.Do kukwira kurapwa kwemadziro emarara uye kwakakanganiswa chikamu ne putty;
2.Sevha blender kusanganisa iyo primer uye latex pende zvakasiyana;
3.Svinudza iyo primer yakaenzana kune iyo nzvimbo yekuvaka neiyo roller brashi;
4.Carry kunze kwekuvakwa kwekutevedzera mabwe ejira kana iyo primer yakaoma, svina iyo nzvimbo yekuvaka nematepi emasaini zvichienderana nehukuru hunodiwa;
5.Kushandisa iyo latex pendi kune primer ne roller brashi, wobva waisa ruvara mafiripi neine flaking pfuti kubva kumadziro neakareba 30-50cm, asi 10-20cm pamutsara wemadziro. (Zvakanaka kuparura maratidziro emavara nemaoko ako, asi ive shuwa yekugoverwa-zvakanaka.)
6.Sevha brashi yekutsvaira kuti ubvise iwo mavara edeakisi asina kugadziriswa mushure memaawa makumi maviri nematatu ekuvaka. Zvadaro bvisa matepi ekuisa. Dhonza matepi anogadzika padyo nejendeti zvishoma kuti usakanganise iyo yapera.
7.Spray topcoat nepfuti yekusvipira kusvikira jasiing yakaoma zvachose kudzivirira kuwira pasi pamwe nekusvika pamhedzisiro yekudzora moto, kuferefetwa kwemvura, asidhi uye alkali-kuramba uye antipollution.